Above Suspicion (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
နဂါးမယျတျော Emilia Clarke ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားတဲ့ ဖွဈရပျမှနျကိုအခွခေံထားတဲ့ imdb 5.5 ရထားတဲ့ ဇာတျကားလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ အိမျထောငျရှိ FBI Agent တဈယောကျဖွဈတဲ့ Mark ဟာသူရာထူးတိုးဖို့ မူးယဈဆေးဝါးအမှု့တှကေိုလိုကျရငျး သတငျးပေး Susan Smith နဲ့ ညှိစှနျးမိပီးဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာကွညျ့ရမဲ့ ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။နောကျဆုံး Susan Smith အသတျခံရလိုကျတဲ့အခါ ဘယျသူသတျလိုကျတာလဲ ? Susan Smith ရဲ့ ယောကျကြားလား ဒါမှမဟုတျ မူးယဈဆေးဝါးတှနေဲ့ ပတျသကျနလေား ? FBI Agent ဖွဈတဲ့ Mark ပဲလားဆိုတာ ဇာတျကားမှာစောငျ့ကွညျ့လိုကျပါအုံး
ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Van ဖွဈပါတယျ
နဂါးမယ်တော် Emilia Clarke ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံထားတဲ့ imdb 5.5 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အိမ်ထောင်ရှိ FBI Agent တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mark ဟာသူရာထူးတိုးဖို့ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု့တွေကိုလိုက်ရင်း သတင်းပေး Susan Smith နဲ့ ညှိစွန်းမိပီးဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြည့်ရမဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး Susan Smith အသတ်ခံရလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်သူသတ်လိုက်တာလဲ ? Susan Smith ရဲ့ ယောက်ကျားလား ဒါမှမဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ ပတ်သက်နေလား ? FBI Agent ဖြစ်တဲ့ Mark ပဲလားဆိုတာ ဇာတ်ကားမှာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါအုံး
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ်
Option 1 server.mfile.cloud 494 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 494 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 494 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 494 MB SD (480p)
Option5storage.msubmovie.com 1.2 GB HD (1080p)
Option6server.mfile.cloud 1.2 GB HD (1080p)
Option9server.mfile.cloud 4.1 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com 4.1 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 11 sharer.pw 4.1 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 12 yuudrive.me 4.1 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Furie (2019) 2019